Mmiri ọ drinkingụ drinkingụ nwere ike igbochi ọkụ ọkụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Otu esi egbochi ikpo ọkụ - otu esi eme ihe
Mmiri ọ drinkingụ drinkingụ nwere ike igbochi ọkụ ọkụ?
Na-agba ume nammiri nwere ikebụrụ ihe dị mkpaigbochi ọkụ ọkụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ijide n’aka na ị nọna-a drinkingụ mmanyaịdị mma Dị elummiri. Kpọọ obodo Culligan gị ka ọ chọpụta ogo nke gịmmiri ọ drinkingụ .ụ.08.06.2017
Ọ malitere dị ka ụbọchị ọ bụla. Arụrụ m etiti ụlọ. Ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu - mana ịnọ na anyanwụ siri ike izere mgbe ị na-arụghachi ọrụ n'ụlọ.
Ma mgbe awa ole na ole gasịrị, enwere m ụkwụ ụkwụ
Isi m na - agba okirikiri; Achọrọ m ịgbọ agbọ. Echere m na ọ nwere ike ịbụ ihe m riri
Emechara m chọpụta na m dara ada. O bu otu ihe di nfe izere. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa ngwa na mbụ, ọ pụrụ igbu.
NA Ọ P ONLR HA ONLB WORR ONL NA-AR U ỌR THE N'okpuru Anyanwụ. Anọ m n'ọhịa n'oge ọkọchị gara aga. Achọpụtara m na ike gwụrụ m.
Anọgidere m na-arụ ọrụ n'ihi na achọrọ m ịhọrọ dị ka o kwere mee. Mgbe obere oge dị ka ọ siri ike itinye uche; Enwere m mgbagwoju anya, na-agbagha. Amaara m na m kwesịrị ịjụ oyi ebe
Ma enweghị ndò ebe ọ bụla, ọ nweghị ebe ịnọ na ndò ahụ. Amalitere m ịsụ ngọngọ na-achọ ebe m ga-anọdụ ala. Ọ B DIS Ọrịa Ọrịa na Onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'èzí nwere ike ịme.
MA MGBE ND EM ỌR AND NA ND EM ỌR TA NA-EME ỌG TOG THIS KA A GHARA, MMADONE NILE NỌP CANR CAN N’ỌNW AND NA AH HE. MGBE YOU NA-Arụ ọrụ n’èzí ma na-arụ ọrụ anụ ahụ - Karịsịa mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ - Ahụ gị na-aghọ ọkụ. Ọ B IFR YOU NA NOT NOTAGHINK EGO ỌT OFM OF MMIRI MA WERE IRI ỌR AND KWES COR DOWN KWES DOWNR DOWN ,R DOWN.
Achọpụtara m na ọ gaghị ewe nnukwu oge iji mee ka ahụ dịkwuo gị mma. Na nkeji ị ga-adị mma, naanị inwete ọkụ. Na mberede, ọ dakwasịrị gị - ike gwụrụ gị, akpịrị na-akpọ gị nkụ ma na-arịa ọrịa.
FỌD OF N’IME ND E D E ICHE ICHE NA-AH INH IN NA-ACHUD MUSLỌ MUSCLE, SWBER EX N’CBC ,B,, HEB HERAST ỌRAST N’ ,B,, N’ ,B FEREL TB ,R,, Isi Ọwụwa, ọgbụgbọ, agbọ, na uju. Ihe ndị a nile bụ ihe mgbaàmà nke ikpo ọkụ ọkụ. IKPỌ ỌK IS B IS MB OFR OF ỌKP OFTA AHER AH,, ND, ỌR CAN P CANR D DN D NA-ACH D NA YA.
Ihe ịrịba ama nke ọkụ ọkụ bụ oke ahụ ọkụ, obere ma ọ bụ enweghị ọsụsọ, na uhie, na-ekpo ọkụ, akọrọ akpụkpọ. Nwekwara ike ịnwe oke nhụjuanya, ịsụ nsụ, mgbagwoju anya, na ọbụna ịkwụ ụgwọ. MALITE NA NKE MBU OFM OF ỌR ASA Ọrịa NA-EJE ỌR AS N’ ASBỌR THEY KA Ha KWES NER AS ỌR M ỌZỌ.
EFỌD HE HEDAL ỌH HERAL AHAL, D AS KA ỌB HEBU ORB ORR OR MA Ọ B D ỌB DR,, EME KA YOU KWESORE IKE, KWURU Dọkịta gị gbasara ọrụ gị na okpomoku. ỌRUC ỌR,, Ọrịa ỌR IS dị mfe izere - Nzọụkwụ iji gbochie ya kwesịrị ịbụ naanị akụkụ nke ọrụ: mmiri, ihere, izu ike na ọzụzụ. NA-A WATU MMIRI MGBE, O BU MA Mgbe EN Bughi nke ato
A KWES RR DR DRINKINK 4 KPUKU MA Ọ B 8 8 CONS OF Water C PER HOUR Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ihu igwe. ỌR OB gị ịrụ ọrụ na-enye ọtụtụ ọkụ, oyi mmiri n'oge KBỌ Ọrụ. Mgbe mbụ m nụrụ na m ga-a atụ ma ọ dịkarịa ala iko mmiri anọ kwa awa, ọ na-ada ụda nke ukwuu.
na-elekwasị anya na ekwentị
Echere m na m ga-aga ọtụtụ ebe mposi. Ma mgbe m nọ n’anyanwụ, ọsụsọ na-agba m nke ukwuu n’ime mmiri m na-a drinkụ, anaghịkwa m aga ezumike n’ụlọ mposi. Jide n'aka na ị na-ezu ike na ihe ngosi.
Site na iwu, ị nwere ike chọọ obere oge nke oge ise iji zuo ike ma zuo ike site na ọkụ na onye ọrụ gị ga-enye mpaghara ebe. Oge ụfọdụ na-atụ ndị ọrụ egwu ịkwụsị izu ike. I NA-EME NT THEP TO TOR TO ỌR AND NA EGO NA-EME MA Ọ B WAN NA-ACHỌ GOSI NA ARE B A ỌMA, ỌR ST ỌRR ỌR ST.
Ma udo nwere ike n'ezie ka Ọ ỌZỌ na-arụpụta. Dịka onye were anyị n'ọrụ, anyị kwesịrị ịzụ ndị ọrụ anyị gbasara ọrịa ọkụ, ihe anyị na-eme na weebụsaịtị anyị iji gbochie ya, yana otu anyị nwere ike isi meghachi omume na mberede. N'ikpeazụ, ọ na-akwụ ụgwọ iji jide n'aka na onye ọ bụla kwadebere nke ọma.
Ndị na-arụrụ ọrụ ga-azụrịrị ndị ọrụ na-azụ ọkụ gbasara ọkụ na otu esi egbochi ya. ND Ọ R MUSỌR MUS AGAGHT AKWTKWỌ ANBỌR FOR IWU. Nke a gụnyere ndị ọrụ, ihe ndị a ga-eme ma ọ bụrụ na mmadụ enweta ọrịa, onye ga-akpọ enyemaka enyemaka ahụike na otu esi enye nkọwa doro anya banyere ebe ọrụ.
Ugbu a anyị matara akara ndị ahụ, anyị ga - ahụzi ihe mgbaàmà mbido n’onwe anyị na onye ọrụ anyị nke asatọ. Anyị makwa ihe anyị ga-eme ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime anyị arịa ọrịa. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị na-eme ihe ozugbo.
Chọta mgbaàmà ndị mbụ mere ka ị mara na ị maara ibe gị ebe ị na-arụ ọrụ na onye ị nwere ike ịkpọ maka enyemaka ahụike. N'ebe anyị nọ, anyị na-agbanwekwa etu anyị si arụ ọrụ ahụ, dịka.
B. bido n'isi ụtụtụ iji zere oge ọkụ. Ọzọkwa, m na-enye ndị ọrụ obere ọrụ maka izu 2 mbụ ka ha wee nwee ike ịmalite ịrụ ọrụ na okpomọkụ.
Mụ na ndị ọrụ ibe m na-eyi uwe na-acha odo odo na okpu iji mee ka oyi dị. Amụtara m na na mbido n’ịhụ na ndị ọrụ m nọgidesiri ike ma dị jụụ, mmụọ ha na-ebili, ha na-arụpụtakwu ọrụ, nke ahụ na-eritekwa ụlọ ọrụ ahụ dum uru. E B A Iwu na California na-echebe gị site na okpomọkụ! A NA-AHOTP EMR EM ndị ọrụ niile n'okpuru iwu a - NA-AHNDR OF NKE OFB THE N'ILỌ NCHE.
Dabere na Iwu ahụ, ndị na-arụ ọrụ ga-eweta: - ọtụtụ oyi, mmiri mmiri, - nkpuchi na oge ezumike - Oge iji mee ka ọkụ ahụ dị - TZỌ - MGBE Ọ B EM Ọ B IT Ọ B IM Ọ dị ezigbo mkpa iji zuo ahụ gị na ahụ gị n'oge ọrụ. Ọ B IFR NOT NA, Ọ P BER SL SLKP AFR AF ỌR IN N'INLỌ ỌZỌ. MGBE YOU B AT N’ HLỌ, NA-A DRụ mmiri, zere ịFụ caffeine na mmanya na-egbu egbu, ma zuo ọtụtụ.
akwara ịnyịnya ígwè
G WHATN IF B IFR IF NA YOU B ACGH AC ACCES NA mmiri, ihere, ezumike, na mmega ahụ, ma ọ bụ na ị naghị enwe nkwadebe? MGBE Ọ B EMR EM? Amaghị m na ọ dị mma iwe nkeji ole na ole iji jụụ na ndò, ọbụlagodi ụbọchị kacha ekpo ọkụ. Agwara m ndị ọrụ ibe m ka m gwa onyeisi anyị banyere ya. Anyị gakwuuru ya dị ka otu ọnụ wee gwa ya na ọ bụrụ na anyị ezughị ike na ndo, anyị agaghị arụpụta ọrụ n'ihi na anyị na-ekpo oke ọkụ ma na-agwụ ike ma anyị na-arịa ọrịa mgbe ụfọdụ.
Mana inwe ike izu ike na mpaghara ebe izu na-enyere anyị aka ịchekwa ahụike. Companylọ ọrụ ahụ dum na-erite uru mgbe anyị nwere ike ịrụ ọrụ anyị nke ọma. Ọ B IFR IF na onye ọrụ gị anaghị enye gị ọrụ ziri ezi iji gbochie ọrịa na-ekpo ọkụ, ị nwere ike ịkpọ OSHA.
Ọ bụ gị ga-aza ajụjụ maka ahụike na nchekwa na ọrụ. I NWERE IKE REKP THETA NSOGBU NA-ENWEGH NAME AHA. Enwere ihe dị iche iche na ndò dị n'ọhịa na ị toụ mmiri mgbe mgbe.
Obi dị anyị mma ma nwee ike ịrụsi ọrụ ike. Ugbu a, anyị amatala etu anyị ga - esi lekọta onwe anyị - ma nke ka mkpa bụ na anyị maara etu esi azọpụta ndụ. MMIRI, DAL N’ CM,, NA-EKPERE N’OUW WORGH IT ỌR IT N’ CB CGH WOR WORB WORR!!
Gini mere m ga-enweta ọrịa strok n'ụzọ dị mfe?
Mgbe iru mmiri ahụ dị elu, ọsụsọ gị enweghị ike ịmịpụ dị kamfena ahụ gị na-enwe ihe isi ike ịjụ onwe ya, na-eme ka ị nwee ikeike gwurunaokpomoku. Mgbeokpomọkụindex bụ 91 F (33 C) ma ọ bụ karịa, gịkwesịrịkpachara anya ka ị ghara ịjụ oyi.10.11.2020
Kedu otu ị ga - esi gbochie ike ọgwụgwụ na ikpo ọkụ?
Na-egbochi ike ikpo ọkụnaokpomoku
na-a plentyụ ọtụtụ ihe ọ coldụ coldụ oyi, karịsịa mgbe ị na-emega ahụ.
nara baths ma ọ bụ mmiri oyi.
yikwasị uwe na-acha ọkụ, na-enweghị akwa uwe.
fesa mmiri na akpụkpọ ma ọ bụ akwa.
zereAnyanwụ n’agbata 11am na 3pm.
zereị alcoholụbiga mmanya ókè.
zeremmega ahụ gabigara ókè.
Kedu ka ị si emeso okpomọkụ?
Emikpu gị na mmiri oyi. Bathsa mmiri oyi ma ọ bụ mmiri ice abụrụla ụzọ kachasị dị irè iji belata ngwa ngwa ahụ gị.
Jiri evaporation jụrụ usoro.
Jiri akwa ice na blanket jụrụ oyi kpuchie gị.
Nye gị ọgwụ iji kwụsị gị ịma jijiji.
Gịnị ka m kwesịrị ị drinkụ maka ikpo ọkụ ọkụ?
Enyemaka mbu makaike gwuru:
Na-aụmmiri oyi, dị ka mmiri ma ọ bụ egwuregwuụọ ihe ọ .ụ .ụ. Mechie onwe gị na mmiri oyi ma ọ bụ wụsa mmiri dị jụụnke giisi, olu, na uwe. Tọpụ ma ọ bụ wepụ ọtụtụ uwe dị ka o kwere mee. Ọ bụrụgịadịla mma na 1 awa, gaa na ngalaba mberede.
Na-enye mmiri ọkụ ọkụ?
Kwe ka onye ahụ coolụọ oyimmiriiji rehydrate, ọ bụrụ na ọ nwere ike. Emelanyesugary, caffeinated ma ọ bụ aholicụrụma to a person withokpomoku. Zere ihe ọ drinksụ drinksụ dị oyi, dị ka ndị anwere ikekpata akpịrị afọ.
Nwere ike ikpo ọkụ n’onwe ya pụọ?
Ike gwụrụna-eme mgbeiheahụ na-agwụ ike ma gharazie ịchịkwa yayaahụ dị n'imeokpomọkụ.NaA naghị ele ọnọdụ anya dị ka ihe na-eyi ndụ egwu ma ọ bụ mmiri mmiri na izu ike na-agwọ ya.
Kedu ihe ị ga-a drinkụ iji gbochie ọkụ ọkụ?
Na-aụọtụtụ mmiri mmiri n'oge eme ihe n'èzí, ọkachasị n'oge ọkụ. Mmiri na egwuregwuụọ ihe ọ .ụ .ụbụụọ ihe ọ .ụ .ụnke oke.Zeretii nwere kọfị, kọfị, soda na mmanya na-aba n'anya, n'ihi na ihe ndị a nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ. Yiri uwe dị fechaa, kpara nke ọma, uwe dabara adaba na agba dị mfe.
And na-eme nke okpomọkụ ọrịa strok?
Don''tnye onye ọ withụ withụ ihe ọaryụ sugụ nwere shuga, caffeinated ma ọ bụ mmanya na-aba n’anyaokpomoku. Zerekwa ihe ọ drinksụ drinksụ oyi na-atụkarị, n'ihi na ndị a nwere ike ibute mgbu nke afọ. Bido CPR ma ọ bụrụ na onye ahụ efunahụ onwe ya ma gosipụtaghị ihe ịrịba ama nke ịgbagharị, dịka iku ume, ụkwara ma ọ bụ mmegharị ahụ.
Unere dị mma maka ike ọgwụgwụ nke okpomọkụ?
Jụụ na banana “ice cream” dị jụụ - enweghị shuga ma ọ bụ mmiri ara ehi agbakwunye, sọsọ banana 100 pasent.Uneredị elu na potassium, mineral dị mkpa na ọrụ ahụ ike. Mgbe aru dị obere na potassium, mọzụlụ ahụ ga-akpụkpu, ọkachasị ma ọ bụrụ na akpịrị akpọghị ya.6 nov. Dec 2019
laa azu mmega mmeghari ahu
Mmiri ara ehi ọ dị mma maka ike ọgwụgwụ nke okpomọkụ?
Mmiri bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme erughị otu awa. Ihe ọ drinksụ Sportsụ egwuregwu ga-eji dochie anya electrolytes furu efu na ọsụsọ mgbe mmega ahụ siri ike. Na mgbakwunye na rehydration mgbe arụsi ọrụ ike, otu iko chocolatemmiri araga - enyere aka gbanye mmanu na aezingwakọta nke carbohydrates na protein.Jul 19 Dec 2019
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nweta okpomọkụ na ihu igwe ọkụ?
A na-ahụ ọkụ ọkụ ma gbochie ya. Mee usoro ndị a iji gbochie oke ọkụ n'oge ihu igwe: Yiri uwe na-adịghị akwa, nke na-ebu ibu. Iyi uwe gabigara ókè ma ọ bụ n'uwe dabara adaba agaghị ekwe ka ahụ gị jụọ oyi nke ọma. Chebe megide ntachu.
Kedu ka esi belata ihe egwu gị nke okpomoku?
Iji belata ihe ize ndụ gị nke ịrịa ọrịa, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịmatakwu ihe mgbaàmà nke okpomoku na ihe ịrịba ama ịdọ aka na ntị nke ọrịa metụtara okpomọkụ. Nchọpụta ngwa ngwa dị oké mkpa iji zere ọdịda akụkụ ahụ, enweghị mmerụ na ọnwụ. (1)
Kedu ihe na-eme n'ahụ gị mgbe ị na-ekpo ọkụ?
Iku ume gị nwere ike ịmalite ọsọsọ ma dị omimi. Gba ọsọ obi. Ọbara gị nwere ike ịbawanye ụba n'ihi na nrụgide na-eme ka obi gị nwee nnukwu ibu iji nyere gị aka mee ka ahụ gị dị jụụ. Isi ọwụwa. Isi gị nwere ike ịma jijiji. Ọ bụrụ na ịchọrọ na mmadụ nwere ike ịnwe ahụ ọkụ, chọọ enyemaka ahụike ozugbo.